याहु: अनुजासँग जोडिएको प्रसंग
बुधबार एक राष्ट्रिय दैनिकको पहिलो पृष्ठमा समाचार आयो ‘धन्य अनुजा, जसले भेट्टिएको ९१ लाख फिर्ता गरीन्’ भोलिपल्ट उनलाई राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, प्रधानन्याधिस रामप्रसाद श्रेष्ठले टेलिफोनबाट बधाई दिएको अझ राष्ट्रपतिले काठमाडौं आउँदा आफूलाई भेट्न निम्तोसमेत दिएको समाचारले स्थान पायो ।
कुरा हो, अनुजा बानियाँ २२ वर्षीया युवतीको । जसले बसमा हिराको हारसहित ९१ लाख रुपियाँको पोको भेटेनि अरे अनि जसको हो उसैलाई उसैलाई फिर्ता गरिन् । सुन्दै अचम्म लाग्ने, अझ अचम्मको कुरा त अनुजाले ती पैसा धनीले पुरस्कारस्वरुप दिएको २ लाख रुपैयाँ र हिराको हार लिन मानिनन् रे । अधिकाशंले यो कुरा पत्यार गर्न सकेनन् । यसबारे सोधखोज हुदै गएपछि घटना झुट सावित भइसकेको छ । प्रकरणले विभिन्न प्रसंग समेत जोडिएर आएको छ ।
अनुजा बानियाँ– ‘धन भनेपछि महादेवको पनि तीन नेत्र’ सम्पतीको कुरा आउने वित्तीकै नेपालीको उखान अगाडी आइहाल्छ । एक २२ वर्षिया युवती (प्रकाशित फोटो हेर्दा उनको स्वाभाव यस्तो देखिदैन जसले हातमा परेको करोडौ रुपैयाँ फिर्ता गर्न सकोस्) जसले ९१ लाख फिर्ता गरेको भन्ने वित्तीकै पत्याउने हामी कति मूर्ख ! रातारात चर्चामा ल्याउन उनले गरेको नाटकले सम्पति र लोकप्रियताका लागि ‘जे’ पनि गर्न तयार हुने नेपाली युवाको उल्टो मनोवृत्तीलाई उदांगो बनाएको छ ।
एक दशक लामो शसस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक दलको खिचातानीले देश दिनदिनै ओरालो लाग्दैछ । बढ्दो बेरोजगारीसँगै युवाहरुमा स्वदेशबाट पलायन या त खराव र अपराधिक मानसिकताले डेरा जमाउँदैछ । हाम्रो शिक्षा, आत्मनिर्भर बनाउने भन्दा पनि बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनीरहेको छ । नैतिकताको धरातल दिनदिनै कमजोर हुँदै गएको विषय सोचनिय छ ।
‘अनुजा त खराव रै छिन्’, भनेर मात्र यो प्रकरणको सहि विश्लेषण हुदैन । चर्चा र सम्पतिका लागि धेरै नेपाली युवाले गरेका हर्कत केलाएर हाम्रो समग्र प्रणालीमा नै सुधार जरुरी छ ।
आमसंचारमाध्यम ः अनुजालाई संचारमाध्यमले सार्वजनिक गर्र्यो । समाचारले एक÷दुई दिनका लागि उनलाई त फाइदै भयो होला तर विविध आरोप खेपिरहेको नेपाली सञ्चार माध्यमलाई भने यो प्रकरण ‘एैजेरु’ बनेको छ । समाचारमा सामान्य प्रश्नका उत्तर (को, के, कुन) जस्ता सामान्य कुराहरु आवश्यक हुन्छ । तर समाचारमा एकतर्फी रुपमा पाएको सुचनाको आधारमा मात्र समाचार बनाउदा गम्भिर त्रुटी भएको हो । आगामी दिनमा यस्तो प्रवृत्तीबाट बच्नका लागि नेपाली सञ्चारमाध्यमले सचेत बन्नुपर्ने पाठ सिकाएको छ । पैसा बुझेको व्यक्तिसँग नसोधिकन समाचार किन लेखियो, अनुजाले भनेका कुराप्रति किन क्रस चेक गरीएन, साधारण व्यक्तिले पत्याउन नसक्ने कुरा पत्रकारले किन छिट्टै विश्वास ग¥र्यो ? जस्ता प्रश्न उठेको छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानन्याधिश ः घटना सुन्ने वित्तीकै सामान्य मानिस, जो कोहीले पनि तत्कालै विश्वास गर्ने खालको छैन । तर, अनुजाको कुरा सुन्नेवित्तीकै हतारमा राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपतिले हतारमा बोलको कारण नैतिक संकट आएको छ । राष्ट्रपति जस्तो उच्च ओहोदामा बसेको व्यक्तिलाई कुनै कुरामा हतारमा क्षणिक टिप्पणीको आवश्यक थियो र ? कि हाम्रा राष्ट्रपति महोदयले पनि लोकप्रियता खोजेका हुन् कि !
चौटा खान गा’की बुढी झोलमा डुबेर मरी भन्ने उखान अनुजाका लागि चरितार्थ भएको छ । दुई दिनमा उनले जति लोकप्रियता पाइन् अब त्यो भन्दा कयौ गुणा बढी बदनामीको पात्र हुनपर्नेछ । पुरै देशसँग प्रकरण जोडिएकाले यसको छानविन हुन जरुरी छ । यस प्रकरणमा राज्यले के गर्ला, सञ्चारमाध्यमको भूमिका होला कि नहोला, अनुजालाई कस्तो कारवाही होला ? सबै नेपाली यी प्रश्नको जवाफ कुरीरहेका छन् ।
सुनकोसी साप्ताहिकको ‘युथ कर्नर’ स्तम्भमा वैशाख १४ गते (27 April ) मा प्रकाशीत
Posted by Journalist Yadav at 2:37 AM